Tsidi-bilaogy Aziatika atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2018 3:06 GMT
- Tazzy manoratra fizarana maromaro momba ny mariazy amboarina mahazatra ao Azia Atsimo. Aza miala raha te-hanaraka ny tohin'ny tantara.
- ‘Allah hafiz’ na ‘Khuda hafiz’- Asif miresaka ireo fehezan-teny Indo-Islamika mampiadi-hevitra amin'ny hoe “veloma” ampiasaina ao Bangladesh.
- Ishtiaque manoratra andiana lahatsoratra momba ny diany vao haingana tao Cox's Bazaar, morontsiraka natioraly lava indrindra manerantany.
- Robin namoaka sary sokitra fiara tokana ao Dhaka, izay vita amin'ny rojom-bisikileta, kojakojan'ny fiara sy vy hafa.
- Natsahatry ny mpandraharaha an-tariby Bhotaney ny fandefasana ireo fantsom-baovao sy fialam-boly Indiana sasany, izay voampanga ho manohintohina ny soatoavina ara-kolontsaina Bhotaney, ankoatra ny fanelingelenana ny mpianatra amin'ny fianarany.
- Preetam Rai mandefa fanomezam-boninahitra ho an'ny Andron'ny Fahaleovantena ao India.
- Manish of ‘Sepia Mutiny’ mitatitra fa manana hanitra Desi ny rakibolana vaovao Oxford amin'ny teny Anglisy.
- ‘Na dia ireo Andriamanitra Indiana aza dia sahanina avy ao Shina’ – araka ny fahitan'ny Amit ao amin'ny ‘India Uncut’.
- Kozhikode no tanàna voalohany tsy misy famanizana an-dalambe ao India – tao amin'ny ‘The scientific Indian’.
- Nitin ao amin'ny ‘The Acorn’ maminavina ny anaran'ny balafomanga Pakistaney manaraka.
- Dinesh Wagle ao amin'ny ‘United We Blog’ manadihady ireo mpifaninana amin'ny Miss Nepal 2005 ary manontany ny nofinofin'izy ireo.
- Vishnu miresaka momba ireo vondrona tohanan'ny fitondrana Nepaley, izay araka ny heviny, hanaratsy ny toe-draharaha efa mihoso-drà ao Nepal.
- KO miangavy amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) mba hampody ilay mpampihorohoro atao haza lambo ao Pakistan, Altaf Hussain, izay nomen'ny UK fialokalofana.
- Pakistani Perspective mampifandray amin'ny lahatsoratra milaza fa mandray ny efatra isanjaton'ny harin-karena anatiny ao amin'ny firenena ny miaramila ao Pakistan ary ny Jeneralin'ny tafika dia mitentina Rs 300 tapitrisa.
-Misaona ny fahafatesan'Atoa L. Kadirgamar, minisitry ny raharaham-bahiny ao Sri Lanka novonoin'ireo lazaina fa LTTE mpampihorohoro ny tontolon'ny bilaogy Sri Lankey. Nanoratra i Prabhath fa “nampanginina ny feo hendry indrindra ao Sri Lanka izay manohitra tsy amin-tahotra ny fampihorohoroana.” Miahiahy i Selvarajah fa noho ny fanambarana vonjy taitra, afaka manorisory ny Tamils ​​amin'ny fisamborana azy ho ahiahiana ny manampahefana. Mivavaka i Mahangu mba tsy hidika ady hafa izany.